Madaxweyne ku xigeenka Puntland & xildhibaan ka tirsan barlamaaanka oo isku khilaafsan lacagihii abaaraha Oo La Musuq Maasuqay - BAARGAAL.NET
Madaxweyne ku xigeenka Puntland & xildhibaan ka tirsan barlamaaanka oo isku khilaafsan lacagihii abaaraha Oo La Musuq Maasuqay
✔ Admin on April 13, 2017 0 Comment
Waxaa soo shaac baxaya inuu jiro khilaaf u dhaxeeya Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo xubno katirsan Barlamanka Puntland.
Khilaafkan ayaa wararku sheegayaa inuu salka ku hayaa deeq maamulka Puntland uu ka helay dowladda Federaalka Somalia, taasoo loogu talo galay dadka abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gobollada Puntland.
Deeqdan oo gaaraysa 250.000 dollar ayaa xogto sheegaysaa in qayb kamid ah magaalada Muqdishu ku qaateen Xildhibaanada kasoo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag kuwaas sheegay inay wakiil ka yihiin deegaanadooda, halka qaybtii loogu talo galay gobolka Mudug uu iyadoo Kaash ah gaarsiiyay Madaxweyne ku-xigeenka oo dhawaan booqasho ku tagay.
100 kamid ah lacagtaas oo loogu talo galay gobollada Nugal iyo Bari ayaa dhawaan waxaa lagu wareejiyay hay’adda Biyaha iyo Tamarta Puntland ee loo yaqaano BASAWEYN taasoo dowladdu ka codsaday inay kusoo gado baabuur biyo loogu dhaamiyo dadka abaaraysan.
Waxaa jira in horay dowladdu lacag deeq ah ugu gaday gawaari Booyado ah.
Tallaabadan ayaa waxaa ka horyimid Xildhibaanada kasoo jeeda labaad gobol oo sheegay inaysan munaasabad ahayn in lacagtaas lagu gado gawaari xilli kuwii hore joogaan, waxayna ka codsadeen Madaxweyne ku-xigeenka inuu lacagtaas ku wareejiyo guddiyada culimada si raashin iyo agab kale loogu iibiyo dadka xooluhu dhaafeen.
Tallaabadan ayaa keentay is-mari waa u dhaxeeya labada dhinac, waxaana xogta ay helayso Warbaahintu sheegaysaa inaan wali xal laga gaarin.
Khilaafkan ayaa soo baxay xilli Camey uu hormuud ka yahay guddiga gurmadka abaaraha ee dhinaca dowladda, waxayna soo baxday xilli waddanka uu ka maqanyahay Madaxweyne Gaas.